China Mirror Abstract Stainless Steel Ornament Sculpture As Exterior Landscape Decor orinasa sy mpanamboatra | Piedra
Sarivongana vita amin'ny firavaka vita amin'ny vy marevaka toy ny haingon-trano ivelany
Laharana modely: MLS26
Tianao ity sary sokitra vita amin'ny vy stainless vy ity? Heveriko fa hitondra an-tsary ny vokany samihafa amin'ny sary ity kanto tsy mitombina ity. Ny metaly dia fitaratra sy nohosorana, ary azo anaovana matte sy hosodoko na elektroplating sns fanaovana asa-tanana. Araka ny fantatsika fa ny fitaovana vy tsy misy fangarony dia maharitra sy porofo tsy tena harafesina izay be mpampiasa amin'ny sehatry ny famolavolana sary sokitra. Ampiasainay ny vy tsy misy fangarony 316L ho toy ny akora ivelany vita amin'ny vy tsy misy fotony, izay iray amin'ireo fitaovana vy tsara indrindra. Ny metaly tsirairay dia asiana miaraka amin'ny alalàn'ny sary sokitra. Ianao ve mahaliana ity sary sokitra vita tanana ity? Ampahafantaro anay ny hevitrao.
Anarana sary sokitra Vokatra vita amin'ny sary sokitra vy lehibe vita amin'ny vy
Color Loko miloko na namboarina
Fitaovana lehibe 316L vy vy
Nomera sary sokitra MLS26
Craft Voalamina sy vita tanana
Namolavola manokana Eny
Size 1.5m 2m haavony sns
Drafitra manokana Mpanao sary sokitra malaza
Fomba fandoavana TT / Union tandrefana
Application Sary sokitra ampahibemaso, sary vongana an-tanàna, sary vongana zaridaina sns
Port Xiamen Port China
Package Fiarovana indroa (fonosana anatiny sy ivelany)
Sample Afaka manao santionany namboarina ho an'ny mpanjifa izahay
Quality Departemanta QC
Ny fahaiza-mamatsy Sasa 10 isam-bolana
Matevina mavesatra amin'ny alàlan'ny rano sy ny foibe tsy manjavona ao anatiny.
Nosoratanay ny ekipantsika (Design Design is Welcomed)
Mety amin'ny asa maharitra sy fametrahana mora
Xiamen, Sina (Mainland)
Azo zaraina amin'ny tanana
Amin'ny ranomasina (indrindra)
Fepetra momba ny fonosana
Mba hahazoana antoka ny fonosana sy ny vokatra amin'ny toe-javatra tsara, dia hampiasa fonosana roa heny izahay hiarovana ny entana.
01. Fonosana anaty: sombin-tsakafo / lamba firakotra sy savony matevina hiarovana ny ampahany amin'ny sokitra, indrindra ho an'ny faritra mahafinaritra sasany.
02. Outer packing: kitay hazo matanjaka sy voaroy miaraka amin'ny fantsona vy sy fantsika; Ho ampy ny sela hazo ho fanohanana ny vokatra anatiny hanakanana ny fikorohana.
01. Androany 7-10 andro raha manana sary sokitra isika amin'ny stock.
02. Raha hanao vaovao dia mila 30-35 andro eo ho eo ny habeny mahazatra tsy mihoatra ny 2m ny haavony.
03. Miankina amin'ny zavatra manokana sy ny habetsahany koa, azafady mba lazao aminay ny zavatra takinao.
Azo antoka ve fa ho tsara indrindra ny fonosana?
Eny, miantoka izahay fa azo antoka tsara ny fonosinay. Mampiasa fonosana plywood mahery ho an'ny fonosana ivelany izahay. Ao anaty izahay dia mampiasa sarimihetsika plastika porofo mba hiarovana ny vokatra. Afaka mahazo antoka ianao amin'izany.
Azonao atao ve ny mamatsy varavarana Door-to-Door?
Eny, tena mahay izahay amin'ny Fandefasana varavarana ho an'ny varavarana, azafady ampahafantaro anay ny adiresy amin'ny antsipirihany, avy eo hanome anao ny vidin'ny entana amin'ny adiresy manokana anao.
Ahoana ny fomba andefasanay entana?
Hanononanay ny entan'ny ranomasina izahay, ary tsara kokoa ny mampiasa an'io fitaovana io amin'ny fandefasana entana izay afaka mitsitsy ny sandanao. Ireo mpampandroso anay dia hanome serivisy matihanina hiantohana ny entana tonga soa aman-tsara eo amin'ny toeranao.
sary sokitra avy any ivelany,
sary sokitra zaridaina ivelany
Previous: Sarivongana vita amin'ny volony avo be dia be sary sokitra Swan biby miaraka amin'ny famoronana fitiavana ho toy ny ornament shop
Manaraka: Sarin-tsarimihetsika maoderina malaza malaza amin'ny asa-tanana mamorona endrika haingon-trano ao anaty trano
Sarivongana vita amin'ny metaly Abstract Metal Landscape ...
Sary sokitra vita amin'ny metaly Yard
Zavamaniry vita amin'ny alikaola stainless vy lehibe ...
Hollowed Design Stainless Steel Leaf Garden Art ...
Sary sokitra Swan Animal Fiberglass Ho an'ny Tany ...
Hevitra momba ny tontolo iainana metaly milentika maintso ...